"OH, KUWAAS OO DUQSIYADA!" DUULIMAADKA MIRO AYAA LAGA HELAY MISHIINKA CAGAARAN EE TURKIGA, KAAS OO LOOGU TALAGALAY BIXINTA RUUSHKA - MAQAALLO
"Oh, kuwaas oo duqsiyada!" Duulimaadka miro ayaa laga helay mishiinka cagaaran ee Turkiga, kaas oo loogu talagalay bixinta Ruushka
Waxaa lagu soo wargeliyay Rosselkhoznadzor inta lagu jiro kormeerka horay u soo qaadista. Qayb ka mid ah noocyada citrus Satsuma oo miisaankeedu yahay 22 tan ayaa loo tuuray oo aan loo oggoleyn gaadiidka sababta oo ah waxa ku jira jiritaanka karantiilka - duun khudradeed oo Mediterranean ah.
Sidoo kale, adeegga kormeerku ma uusan oggolaanin dhagaxyada baashaalka baashaalka Washington ee "Dash" loo isticmaalo. Miisaanka qashinka dib loo warshadeeyey waa 48 tan.
Xusuusnow in toddobaad ka hor, Ukraine, dhacdooyin la mid ah oo dhacay intii lagu jiray kormeerka xayawaanka ee Zapadny post ee gobolka gobolka Lviv. Isla goobtaas, avocados oo laga soo dhoofiyay Poland oo ku yaal suuqa bakaaraha ayaa u muuqday in uu cudurku ku dhaco.
Sidee loo ogaadaa miisaanka doofaarka?
Teknoolajiyada digaagga taranta. Waa maxay heerkulka kuleelka ee ukunta digaaga?
Talooyinka wax ku oolka ah sida loo abuuro dabacasaha dhoobada ee dhul furan
Coleus (laga bilaabo Laatinka "Coleus" - "kiis") waa geedo daaq badan, geedo duurjoog ah, geedo duurjoog ah oo lagu koray caleemo dhalaalaya. Waxay ka timaaddaa qaybo kulaaleed ee Afrika iyo Aasiya, waxaana lagu soo bandhigay Yurub qarnigii sagaalaad. Ma taqaanaa? Coleus waxaa kale oo loo yaqaan "nettle" sababtoo ah isku midka ah ee uu afkoda iyo caleemaha la maro; iyo "qalafsanaanta" - sababtoo ah midab kala duwan, oo la mid ah qotomiska, iyo qiimo jaban. Read More
Sida loo milixo squash xilliga qaboobaha: sheyga tallaabo tallaabo tallaabo ah oo karinta